Carriage ka-Ezikhethekileyo iindidi abakhweli
Pregnant abafazi uya ukuzithwala a zonyango okufaneleyo (isatifikethi) besomeleza i-pregnancy iqonga kwi-umhla departure.
Pregnant abafazi e iqonga ka- kwiiveki ngakumbi uya ukuzithwala a prenatal ubungqina kwaye zonyango okufaneleyo ukusuka zabo doctor nto leyo ibandakanya oku kulandelayo:
Umntwana ke ubudala izimisele kwi-umhla ukuhamba ukuvulwa ukususela airport lemveli nto obaluliweyo Iimeko Carriage.
I-omdala unelungelo ze urhuqe enye umntwana iphelelwe phantsi ubudala abo baya kuba travelling simahla ngaphandle kwayo owakhe sokugweba.
I-omdala baya kuba umntwana iphelelwe phantsi ngomhla wakheyakhe lap ngexesha thatha-ngaphandle, ascent, descent kwaye landing.
Kukho ezinye izithintelo ezinxulumene inani abantwana phantsi eminyaka ubudala ngomhla efanayo uhambo: ngomhla we-CRJ — abantwana UBUKHULU.
Abantwana phantsi kwe- leminyaka ubudala (abemi ye-isirashiya) ingaba bavunyelwe ukuba lwaphesheya ngokungqinelana nomgaqo-umthetho we-isirashiya. LUMKA: angakudlakathisi ngokwasemzimbeni wacela abakhweli kuba ilungelo ukwenza isigqibo malunga travelling yi-zezulu independently ngokwelizwi lakheyakhe yesitalatomental imeko. Mphathi akayi kuba netyala kuba zilandelayo iindidi abakhweli kwimeko zonyango kunokwenzeka ingozi kwi bhodi. Ukuhamba Waiver (ebhalisiweyo ifomu) ziya izaliswa e-khangela-kuzo. KHUMBULA: Inadequate uvavanyo i-passenger ke impilo imele threat kuye ukhuseleko ngokunjalo kuba mfo abakhweli kwaye crew amalungu.»PRM»- (Abantu kunye Nokhukuliseko _ephathwayo:) — umntu abantliziyo _ephathwayo: ngu-limited ngenxa yesitalato (sensory okanye motor, chronic okanye yethutyana) shortage, umntu lunxulumano judicially njengoko incapable, ezichaphazelekayo yi-mental ukukhubazeka iingqiqo isiphithiphithi okanye experiencing kwazi bani spatial uhlengahlengiso, uphando zabo ukuziphatha, umntu kunye ubudala olunxulumene utshintsho, kwaye umntu abantliziyo impilo imeko ifuna inkxaso efanelekileyo kwaye Ezikhethekileyo Iinkonzo ethile iimfuno i-passenger. Akhethekileyo iimfuno banelungelo passenger inkonzo phawula yi-standardized ikhowudi iinkonzo ye-Ngamazwe Association of Zezulu Lezothutho IATA (Ngamazwe Zezulu Lezothutho Association) njengoko ngolu hlobo: Phambi-uhambo amalungiselelo ulindeleke ukuba anike ukuhamba ka-angakudlakathisi ngokwasemzimbeni wacela abakhweli. Nibe qhagamshelana nathi ku zethu iintengiso-ofisi okanye nge-ifowuni kungadlulanga iiyure phambi uhambo
Deported abakhweli (administratively ayifakwanga ukusuka na ilizwe) kwaye abakhweli abakhoyo wala faka kweli Lizwe, kufuneka ufumane emva incopho ka-departure. A Isiqinisekiso Kubuyela uya kuba ngokulinganayo! phezulu yi-mandla. Ticket iya kukhutshwa emhlabeni le Isiqinisekiso Kubuya. Mphathi akayi kuba netyala kuba zilandelayo iindidi abakhweli. Passenger kufuneka ahlawule phezulu kubuyela ticket ngexesha lakheyakhe kunye iindleko ezinokufumaneka. I-fare kusetyenziswa ukususela incopho ka-departure ngu nonrefundable. Mphathi linelungelo ukusebenzisa naziphi na izixa-mali imali yi-passenger okanye umbutho ukuze wathenga itikiti le kuba yokugqibela, njengoko afanelekileyo fare coverage.
Wala Ingeniso Passenger uya reimburse i-Mphathi kuba yonke inkcitho arising ngaphandle enjalo carriage (meal, accommodations, ukugqithisa, zezulu ticket njl. njl.).
E-airport ka-departure Premium -Uqoqosho iklasi abakhweli uya kuba ikhangelwe-e a specially libeke hae. Premium -Uqoqosho iklasi abakhweli ingaba yokugqibela ukuba ibhodi. Ukuba practicable Premium-Uqoqosho iklasi abakhweli uzimanye zahlukane ukusuka uqoqosho iklasi abakhweli.
E-airport ka-departure Premium -Uqoqosho iklasi abakhweli zibe ndanikezela thatha i-luncedo kwishishini lounge inkonzo (ukuba kukho nayiphi na e — airport).
Kwi bhodi i-aircraft Premium -Uqoqosho iklasi abakhweli zinikezelwa kunye lezihlalo kwindlu yokuqala imiqolo emibini kwaye inyusiwe meal inkonzo.
Ukuba practicable e-airport ka-indawo ekhethekileyo lezothutho inikeziwe ukuzisa Premium-Uqoqosho iklasi abakhweli kwi-terminal.
Ushishino lounge inkonzo ayiyi kuvunyelwa kuba premium-uqoqosho iklasi abakhweli e-airport ka-engqongileyo. Phezu abakhweli’ arrival e zabo unikezelo okanye transit incopho baya kuba conveyed kwi-terminal ngokunjalo kwi bhodi phambi abanye abakhweli. LUMKA: Baggage belonging ukuba Transit okanye Ugqithise Abakhweli uya kuba iphawulwe angeliso ezongezelelweyo uphawu tag.
Kwimeko booking kwi-code-usharedi uhambo passenger uza kwaziswa kwangaphambili malunga Mphathi zokusebenza oku ezithile uhambo.
Kuba edibeneyo flights mahlanu kunye nezinye airlines, Mphathi imposes eyakhe amazinga kuba baggage imali evunyelweyo nezinye ezikhethekileyo iinkonzo.
Ikhowudi-usharedi flights ingaba echaziweyo kunye ezimbini okanye ngaphezulu codes kunye kwi-i-passenger ke ticket kwaye kwi ulwazi ibhodi e-airport. Okubaluleke kakhulu abantu (VIP) ingaba abantu ubambe ngabemi governmental, loluntu, ezopolitiko, okanye yenkolo indawo baza bathabathela ngokupheleleyo ithuba exclusive iinyhweba ukususela Mphathi.
Mphathi ngokufaneleka umhombandlela yayo VIP abakhweli kwaye abantu abebezimase VIP malunga departurearrival ixesha, ukuncedisa kokudlula airport formalities, nge-khangela-nemigaqo-nkqubo kwaye baggage agciniweyo.
Inkonzo abakhweli kwi-lounges kuba amagosa kwaye kwigqiza labathunywa ke VIP inikeziwe phantsi esa kundoqo isicelo ka-amagosa.
VIP abakhweli uya safika i-airport ka-departure phambi khangela-ukuvala ixesha kuba uhambo. Balaseleyo iimeko, phantsi esa kundoqo sivumelwano kunye Mphathi, kamva boarding ezinjalo abakhweli ngu admissible, kodwa nayiphi na amatyala kungadlulanga imizuzu eli- phambi kokuba ixesha departure obaluliweyo lenqwelomoya.
VIP abakhweli okokuba ngokusebenzisa ukhuseleko ulawulo kwi-esemthethweni kwigqiza labathunywa lounges. Ukuba akukho i-ezingaphezulu incopho ka le ngxelo kulo esemthethweni kwigqiza labathunywa lounge, VIP abakhweli okokuba ngokusebenzisa ukhuseleko ulawulo ngendlela enye amanqaku emva ukuphunyezwa ewonke passenger iitshati. Iimfuno kuba yamiselwa ukhuseleko ulawulo formalities ingaba efanayo njengoko abo kuba nokuqheleka abakhweli.
Iimfuno kuba ngokomgaqo-khangela-formalities kuba VIP abakhweli ingaba efanayo njengoko abo kuba nokuqheleka abakhweli.
Khangela-ngu isetyenziswe kwi-VIP lounge
Ngasinye ka-baggage ngu iphawulwe kunye ezongezelelweyo»VIP»umqondiso tag.
E-airport ka-indawo abakhweli travelling ngokusebenzisa lounges kuba amagosa kwaye delegationsVIP lounges kukho kuqala ukufumana ngaphandle i-aircraft. A ummeli we-Mphathi okanye wagunyazisa iarhente meets abakhweli kwi bhodi kwaye attends kubo VIP lounge. Baggage iphawulwe kunye ezongezelelweyo»VIP»umqondiso tag iya kuba ngaphandle-ifakiwe kuqala phambi kokuba ezinye amaqhekeza aye ka-baggage
UDIBANE USAPHO LAWYER